Inopindura Dhizaini uye iyo Yekutsvaga Kutsvaga Tipping Point | Martech Zone
Inopindura Dhizaini uye iyo Yekutsvaga Kutsvaga Tipping Point
Chimwe chezvikonzero nei takadhonza iyo yekukonzeresa yedu saiti kumusoro kune itsva nharembozha-yakagadziriswa theme yakanga isiri chete ruzha urwo rwaiitwa neGoogle nenyanzvi munzvimbo yeSEO. Isu tanga tichizvionera pachedu mukutarisa kwenzvimbo dzevatengi vedu. Pane vatengi vedu vane nzvimbo dzinoteerera, taigona kuona kukura kwakakura mukutsvaga kwekufambisa pamwe nekuwedzera kwekushanya kwekutsvaga kwenhare.
Kana usiri kuona kuwedzerwa kushanya mune yako analytics, unofanirwa kutarisa webmaster data. Rangarira, analytics kuri kungoyera vanhu vatosvika panzvimbo yako. Webmasters vanoyera mashandisiro anoita yako saiti mumhedzisiro yekutsvaga - kunyangwe vashanyi vachinyanya kubaya kana kwete. Sezvatakashandura vese vatengi vedu kuenda kunzvimbo dzinoteerera mugore rapfuura, takaenderera mberi nekuona kuwanda kwakanaka mukutenderera kwekutsvaga.
Uye hausati wapedza izvozvi. Kuva anoteerera chinhu chimwe chete, asi kuve nechokwadi chako peji rezvinhu zvakagadziridzwa kune vanhu vachirovera kuburikidza nezvigumwe zvavo ndeimwe. Google Search Console inopa ruzivo rwakadzama pane yako saiti uye izvo zvaunoda kuti uvandudze kune yakagadziriswa nharembozha.
Maitiro Ekubvumikisa yako Nhare Yekutsvaga Performance
Kuongorora kwako mobile search performance hakuna kuoma. Pinda ku Google Search Console, endai kune Tsvaga Traffic> Tsvaga Analytics, gadzirisa firita yako uye zuva renzvimbo, uye iwe unogona kuona kuti iwe saiti yako iri kufamba sei. Iwe unogona kuona zvese zviri zviviri zvekubaya uye zvaunoona. Sezvauri kuona nesosaiti yedu, isu tanga tichienzanirana kusvika iyo nyowani inoteerera dhizaini ichangobva kupa kukurudzira kwakanaka.
Google inongoda inoteerera dhizaini. Izvi zvinoratidzwa pane dzakasiyana siyana dzekutsvaga injini algorithm iterations nekufamba kwenguva, uye kunyanya mune ino ichangopfuura shanduko. Kugadzirisa dhizaini kunoita kuti zvive nyore kuGoogle kukambaira, kunongedza, uye kuronga yako saiti. Download YeMarketo Inotsanangurwa Nongedzo kuMobile Kushambadzira nokuti mamwe mashoko.
Infographic: Enda Nhare uye Inoteerera ... Kana Ende Kumba!
Tags: google mobile searchgoogle webmastersgoogle webmasters nharemobile searchmobile search engine optimizationmobile seoWebmaster
7 Maitiro Anoshandiswa Mumutengo Wehungwaru Unotsanangurwa